Crestor vs. Lipitor: भिन्नता, समानताहरू, र जुन तपाईंको लागि राम्रो छ - औषधि बनाम मित्र | सेप्टेम्बर 2021
स्वास्थ्य समुदाय, कल्याण कम्पनी, औषधि जानकारी समुदाय, कम्पनी समाचार कम्पनी, स्वास्थ्य शिक्षा खेलहरु औषधि बनाम मित्र भारी खेल कल्याण मनोरञ्जन स्वास्थ्य शिक्षा, घरपालुवा जनावर स्वास्थ्य शिक्षा स्वास्थ्य शिक्षा, कल्याण औषधि जानकारी, समाचार
मुख्य >> औषधि बनाम मित्र >> Crestor vs. Lipitor: भिन्नता, समानताहरू, र जुन तपाईंको लागि राम्रो छ
रोग नियन्त्रण र रोकथाम केन्द्रहरू (CDC) अनुसार, संयुक्त राज्य अमेरिकाका वयस्कहरूको of 38% को उच्च कोलेस्ट्रॉल छ। यदि तपाईंसँग उच्च कोलेस्ट्रोल छ भने, तपाईंको डाक्टरले तपाईंलाई सम्भावित आहार र व्यायामको महत्त्वका बारेमा सल्लाह दिनेछन्। तपाईंको डाक्टरले स्ट्याटिन औषधि सुरू गर्न पनि उल्लेख गरेको हुन सक्छ। स्ट्याटिनहरू लोकप्रिय औषधी हो, जसलाई एचएमजी-कोए रिडक्टसेस अवरोधकर्ता पनि भनिन्छ। ती काम गर्दछन् एन्जाइम रोक्न (एचएमजी-कोए रिडक्टसेस भनिन्छ) जुन तपाईंको शरीरले कोलेस्ट्रोल बनाउन आवश्यक छ।
Crestor र Lipitor दुई लोकप्रिय ब्रान्ड-नाम स्ट्याटिनहरू कोलेस्ट्रोल स्तर कम गर्न प्रयोग गरिन्छ। दुबै औषधिहरू संयुक्त राज्य खाद्य र औषधि प्रशासन (एफडीए) द्वारा अनुमोदित छ। तिनीहरूसँग स्याचुरेटेड फ्याट कम र कोलेस्ट्रोल कम कोलेस्ट्रोलको साथ आहार प्रयोग गरिन्छ। जे होस् क्रिस्टर र लिपिटर दुबै स्ट्याटिनहरू हुन्, तिनीहरू समान छैनन्। Crestor र Lipitor को बारेमा अधिक जान्नको लागि पढ्न जारी राख्नुहोस्।
Crestor र Lipitor बीचको मुख्य भिन्नता के हुन्?
Crestor (Crestor के हो?) र Lipitor (Lipitor के हो?) दुबै लिपिड-कम औषधि हुन्। तिनीहरू स्ट्याटिन, वा HMG-CoA रिडक्टसेस अवरोधकर्ताको रूपमा पनि चिनिन्छन्। दुबै औषधिहरू ब्रान्ड र जेनेरिक फार्ममा र ट्याबलेटमा मात्र उपलब्ध छन्। AstraZeneca ब्रान्ड नाम Crestor निर्माण गर्दछ, र फाइजर ब्रान्ड नाम Lipitor बनाउँछ। Crestor र Lipitor मुख्यतया वयस्क मा प्रयोग गरिन्छ; यद्यपि, केहि उदाहरणहरूमा, ती बच्चाहरूमा प्रयोग हुन सक्छ।
Crestor र Lipitor बीच मुख्य भिन्नता
औषधि वर्ग HMG-CoA रिडक्टसेस अवरोधकर्ता (स्ट्याटिन वा लिपिड-लोअर गर्ने एजेन्ट पनि भनिन्छ) HMG-CoA रिडक्टसेस अवरोधकर्ता (स्ट्याटिन वा लिपिड-लोअर गर्ने एजेन्ट पनि भनिन्छ)
जेनेरिक नाम के हो? रोसुवास्टाटिन एटोरभास्टाटिन
कुन फार्म (हरू) ड्रग भित्र आउँछ? ट्याब्लेट ट्याब्लेट
मानक खुराक के हो? उदाहरण: १० मिलीग्राम दैनिक उदाहरण: २० मिलीग्राम दैनिक
कसले औषधी प्रयोग गर्दछ? वयस्कहरू; years बर्ष र माथिका बच्चाहरु (केहि घटनाहरुमा) वयस्कहरू; १० बर्ष र माथिका बच्चाहरू (केहि घटनाहरूमा)
सर्तहरू क्रिस्टर र Lipitor द्वारा उपचार
Crestor र Lipitor कोलेस्ट्रोल कम गर्न प्रयोग गरिन्छ। क्रेस्टर वा लिपिटर प्रयोग गर्नुपर्नेछ, कम सेचुरेटेड फ्याट र कोलेस्ट्रोलको आहारको साथ, जब एक्लो डाइटले कोलेस्ट्रोल कम गर्न पर्याप्त मात्रामा काम गर्दैन। Crestor र Lipitor कम कुल कोलेस्ट्रॉल, LDL, ApoB, र ट्राइग्लिसराइड्स । उनीहरूले एचडीएल कोलेस्ट्रॉल पनि बढाउँछन्, राम्रो प्रकारको कोलेस्ट्रॉल।
अन्य संकेतहरू तल चार्टमा सूचीबद्ध छन्। क्रिस्टर र Lipitor फ्रेड्रिक्सन टाइप I र V dllipidemias को उपचार मा अध्ययन गरिएको छैन।
सर्त Crestor Lipitor
वयस्कहरूमा Hyperlipidemia र मिश्रित dyslipidemia हो हो
बच्चाहरूमा पारिवारिक हाइपरकोलेस्ट्रोलिया हो हो
वयस्कहरूमा Hypertriglyceridemia हो हो
वयस्कहरूमा प्राथमिक dysbetalipoproteinemia (प्रकार III hyperlipoproteinemia) हो हो
वयस्कहरूमा होमोजिगस पारिवारिक हाइपरकोलेस्ट्रोलिया हो हो
वयस्कहरूमा धीमा atherosclerosis प्रगति हो हो
हृदय रोग को रोकथाम (हृदयघात, हृदय रोग) हो हो
के Crestor वा Lipitor अधिक प्रभावी छ?
अन्वेषकहरूले क्लिनिकल परीक्षणमा धेरै स्ट्याटिनहरू तुलना गरे STELLAR परीक्षण (एलिभेटिड लिपिड लेभल स्टोजिन थेरापीहरू डोज पार डोज रजुवास्टाटिनको तुलनामा)। तिनीहरूले छ हप्ता पछि LDL (कम घनत्वको लाइपोप्रोटिन) कोलेस्ट्रोल घटाउँदा Lipitor, Crestor, Zocor, and Pravachol को प्रभावहरुमा हेरे।
अध्ययनले निष्कर्ष निकाला कि क्रिस्टरले LDL कोलेस्ट्रॉल Lipitor भन्दा 8.२% ले कम गर्‍यो, र क्रिस्टरले सम्पूर्ण कोलेस्ट्रोलले अध्ययन गरेको अन्य सबै स्टेटिनहरूको तुलनामा उल्लेखनीय रूपमा बढी कम गर्‍यो। क्रिस्टरले एचडीएल कोलेस्ट्रोल (राम्रो प्रकारको कोलेस्ट्रॉल) लाईपिटोरले भन्दा बढायो। क्रिस्टर लिने बिरामीहरूमा डोजको आधारमा 82२--89% ले LDL कोलेस्ट्रॉल गोल हासिल गरे, लिपिटर लिने 69--8585% बिरामीहरूको तुलनामा। सबै स्टेटिनहरू त्यस्तै सहन गरियो।
अर्को अध्ययन भनिन्छ SATURN परीक्षण (इन्ट्राभास्कुलर अल्ट्रासाउन्डद्वारा कोरोनरी एथेरोमाको अध्ययन: रोसुवास्टाटिन बनाम एटोरभास्टाटिनको प्रभाव) क्रिस्टरको उच्च खुराकमा देखियो — mg० मिलीग्राम दैनिक र लिपिटर दैनिक mg० मिलीग्राम — र कोरोनरी एथेरोस्क्लेरोसिसको प्रगतिमा उनीहरूको प्रभाव। कोरोनरी एथेरोस्क्लेरोसिस रक्त वाहिकाको संकुचन हो र धमनीमा क्याल्शियम र फ्याटिन जम्मा हुन्छ, रगत मुटुमा जान गाह्रो हुन्छ, र कोरोनरी हृदय रोगको जोखिम बढाउँदछ।
अध्ययनले सुरक्षा र साइड इफेक्टमा पनि ध्यान दियो। दुई वर्ष अधिकतम डोज गरे पछि, क्रिस्टर समूहसँग LDL स्तर कम र Lipitor समूहको तुलनामा थोरै HDL स्तरहरू थिए। (यद्यपि, यो ध्यान दिन लायकको हुन सक्छ कि क्रिस्टरको निर्माता एस्ट्राजेनेकाले यस अध्ययनलाई लगानी गरेका थिए। साथै, यी औषधीहरू उच्च खुराकमा दिइन्थ्यो जुन औसत बिरामीहरूको लागि क्लिनिकल सेटिंगमा त्यति सामान्य हुँदैन।) क्रिस्टर र लिपीटर दुवैले प्रेरित गरे। समान हदसम्म एथेरोस्क्लेरोसिसको प्रतिगमन। दुबै औषधि राम्रोसँग सहन गरिएको थियो र प्रयोगशाला असामान्यताहरूको कम घटनाहरू थिए।
क्लिनिकल सेटिंग्समा, दुबै औषधिहरू व्यापक रूपमा निर्धारित र राम्रोसँग सहन गरिन्छ। तपाईंको लागि सब भन्दा प्रभावकारी औषधि तपाईंको स्वास्थ्य सेवा प्रदायक द्वारा निर्धारित गर्न सकिन्छ, जसले तपाईंको मेडिकल सर्तहरू, इतिहास, र तपाईंले लिनुहुने औषधीहरू क्रिस्टर वा Lipitor सँग अन्तर्क्रिया गर्न सक्दछ।
क्रेस्टर बनाम लिपिटरको कभरेज र लागत तुलना
क्रिस्टर वा लिपिटर अधिकांश बीमा र मेडिकेयर प्रिस्क्रिप्शन योजनाहरूले उनीहरूको जेरूरिक फार्महरूमा रोसुवास्टाटिन वा एटोरवास्टाटिनमा ढाकेका हुन्छन्। ब्रान्ड-नाम उत्पादन छनौट गर्दा सम्भवत एक उच्च कोपेमा परिणाम हुन्छ वा कभर हुन सक्दैन।
30० को सामान्य प्रिस्क्रिप्सनको लागि, १० मिलीग्राम ट्याब्लेटहरू रसुवास्टाटिन (जेनेरिक क्रिस्टर), आउट-अफ-पकेट मूल्य १ डलर हुनेछ। तपाईं एक फ्रि सिंगलकेयर कुपन प्रयोग गरी सक्नुहुनेछ participating ११ लाई सहभागी फार्मेसीहरूमा।
Or०, २० मिलीग्राम ट्याब्लेटको atorvastatin (जेनेरिक Lipitor) ट्याब्लेट को एक सामान्य नुस्खे को लागी लगभग $ 82 खर्च हुनेछ यदि तपाईं जेबबाट भुक्तान गर्नुभयो। एक एकलकेयर जेनेरिक Lipitor कूपन को मूल्य लाई लगभग $ १ to लाई तल ल्याउन सक्छ।
जसरी योजनाहरू फरक हुन्छन् र परिवर्तन गर्न सक्दछ, क्रिस्टर र Lipitor कभरेजको बारेमा जानकारीको लागि तपाईंको बीमा कम्पनीलाई सम्पर्क गर्नुहोस्।
मात्रा उदाहरण: ,०, १० मिलीग्राम ट्याब्लेटहरू उदाहरण: ,०, २० मिलीग्राम ट्याब्लेट
विशिष्ट मेडिकेयर कोपे $ ०- $ २० $ ०- $ १।
एकलकेयर लागत + ११ + $ १ +
क्रिस्टर बनाम लिपिटरको साझा साइड इफेक्टहरू
क्रिस्टरको सबैभन्दा सामान्य दुष्प्रभावहरू भनेको टाउको दुख्ने, मांसपेशी दुख्ने, पेट दुख्ने, मतली, र कमजोरी हो।
लिपिटरको सबैभन्दा सामान्य प्रतिकूल प्रभावहरू सामान्य चिसो, जोड्ने दुखाइ, पखाला, हातखुट्टामा दर्द, र मूत्र पथ संक्रमण।
क्रिस्टर र लिपिटरको दुर्लभ तर गम्भीर साइड इफेक्ट भनेको मायोपैथी (मांसपेशी कमजोरी) र राबोडोमाइलिसिस हो (मांसपेशिको टिशूको बिरामीकरण, जुन एकदमै हानिकारक हुन सक्छ)। अधिक जानकारीको लागि चेतावनी सेक्सन हेर्नुहोस्।
साइड इफेक्टको घटना खुराकको साथ भिन्न हुन सक्छ। यो साइड इफेक्ट को पूर्ण सूची छैन। अन्य, गम्भीर दुष्प्रभाव हुन सक्छ। तपाईंको स्वास्थ्य सेवा प्रदायकसँग कुरा गर्नुहोस् क्रिस्टर वा लिपिटरबाट के साइड इफेक्टको आशा गर्न सकिन्छ, र तिनीहरूलाई कसरी सम्बोधन गर्ने।
टाउको दुखाई हो .5.%% हैन -
मतली हो 4.4% हो %%
मांसपेशी दुखाई / पीडा हो २.8% हो 8.8%
जोड़को दुखाई हो फरक हुन्छ हो 9.9%
हदसम्म दुखाइ हैन - हो %%
मूत्र पथ संक्रमण हैन - हो 7.7%
कमजोरी हो २.7% हो 9.9%
अपच हैन - हो 7.7%
कब्ज हो २.4% हैन -
पखाला हैन - हो 8.8%
पेट दुख्ने हो ≥2% हो % रिपोर्ट गरिएको छैन
सामान्य चिसो हैन - हो .3..3%
स्रोत: डेलीमेड ( Crestor ), डेलीमेड ( Lipitor )
क्रिस्टर बनाम लिपिटरको ड्रग अन्तर्क्रिया
लिपिटरको बारेमा जान्नको लागि एउटा महत्त्वपूर्ण प्रतिक्रिया भनेको तपाईंले अpe्गुरको फल धेरै मात्रामा खानु हुँदैन (दिनको १.२ लिटर भन्दा बढी)। धेरै अंगूरको रसले तपाईंको शरीरमा लिपिटरको स्तर बढाउन सक्छ, जसले तपाईंलाई मायोपेथी (मांसपेशी कमजोरी) र राबोडोमालिसिस (मांसपेशीय ऊतक बिगार्ने काम गर्दछ, जुन धेरै हानिकारक हुन सक्छ) अनुभव गर्ने बढी सम्भावना गर्दछ।
यी मांसपेशी समस्याहरू अधिक अpe्गुरको रस को अधिक खपत संग हुने सम्भावना धेरै हुन्छ, तर सम्भाव्य रूपमा कम मात्रा संग हुन सक्छ। यदि तपाईं अंगूर खान गर्नुहुन्छ वा अंगूरको रस पिउनुहुन्छ र लिपिटर लिनुहुन्छ भने, तपाईंको डाक्टरलाई सोध्नुहोस् कति उपभोग गर्नु सुरक्षित छ, वा यदि यो अ medication्ग्रेजीले कुराकानी नगरेको फरक औषधि लिन उत्तम हुन्छ भने। क्रिस्टरसँग अpe्गुरको रस अन्तरक्रिया हुँदैन।
क्रिस्टर र लिपिटरसँग केहि औषधी अन्तर्क्रियाहरू छन्, उदाहरण को लागी साइक्लोस्पोरिन, जेम्फाइब्रोजिल, नियासिन, फेनोफाइब्रेट, कोल्चिसिन, र एचआईभी को लागी केहि एन्टिवाइरल औषधि। यी मध्ये कुनै एकसँग क्रिस्टर वा लिपिटरको संयोजनले स्टेटिनको स्तर बढाउन सक्दछ, यसले मायोपेथी र राबोडोमालिसिसको उच्च जोखिम निम्त्याउँछ। औषधिहरूको संयोजन र तपाईंको मेडिकल ईतिहास / सर्तहरूको संयोजनमा, तपाईंको चिकित्सकले तपाईंको औषधि खुराक समायोजित गर्न वा वैकल्पिक औषधी चयन गर्न आवश्यक पर्दछ।
Crestor वा Lipitor लिनु अघि, तपाईको डाक्टरलाई तपाईले लिनु हुने सबै औषधिहरु सम्बन्धी बताउनुहोस्, प्रिस्क्रिप्शन, ओभर-द-काउन्टर (ओटीसी), र भिटामिन सहित, त्यसैले तिनीहरूले निर्धारण गर्न सक्छन् कि क्रिस्टर वा Lipitor तपाईको लागि सुरक्षित छ।
औषधि औषधि वर्ग Crestor Lipitor
जेम्फिब्रोजिल उच्च ट्राइग्लिसराइड्स को लागी औषधि हो हो
केहि एन्टिवाइरल एचआईभी औषधीहरू एन्टिवाइरल एचआईभी औषधीहरू हो हो
Itraconazole Azole antifungal हैन हो
क्लेरिथ्रोमाइसिन म्याकोराइड एन्टिबायोटिक हैन हो
दारोलुटामाइड प्रोस्टेट क्यान्सरको लागि एन्ड्रोजन रिसेप्टर अवरोधकहरू हो हैन
Regorafenib क्यान्सेस अवरोधक क्यान्सरको लागि हो हैन
नियासिन एन्टिलिपेमिक एजेन्ट हो हो
फेनोफाइब्रेट एन्टिलिपेमिक एजेन्ट हो हो
कोल्चिसिन विरोधी स्वाद एजेन्ट हो हो
अंगूरको रस अंगूरको रस हैन हो
रिफाम्पिन एन्टिमाइकोब्याक्टेरियल हैन हो
मौखिक गर्भ निरोधक मौखिक गर्भ निरोधक हैन हो
डिजोक्सिन कार्डियक ग्लाइकोसाइडहरू हैन हो
Crestor र Lipitor को चेतावनी
दुर्लभ मामिलाहरूमा, मांसपेशीहरूको कमजोरी र ब्रेकडाउन स्टेटिन औषधीको कारण हुन सक्छ। यो कुनै पनि खुराकको साथ हुन सक्छ तर अधिक डोजको साथ अधिक सामान्य हो। Years 65 बर्ष वा माथिका बिरामीहरूमा सावधानीका साथ प्रयोग गर्नुहोस्, किडनी समस्या भएका बिरामीहरू, र हाइपोथायरायडिजम बिरामीहरू जुन नियन्त्रणमा छैन। यी जोखिमहरू पनि बढ्छ यदि क्रिस्टर वा लिपिटर, जस्तै फेनोफाइब्रेट, नियासिन, साइक्लोस्पोरिन, कोल्चिसिन, वा एचआईभीको लागि प्रयोग गरिने केहि एन्टिवाइरल औषधिहरू सँगसँगै लिईन्छ भने। यदि तपाईंसँग अज्ञात मांसपेशी दुख्ने, वा मांसपेशि कमजोरी, वा कोमलता छ, विशेष गरी यदि तपाईं थकित पनि महसुस गर्नुहुन्छ र / वा ज्वरो आयो भने, तुरुन्त आफ्नो डाक्टरलाई सूचित गर्नुहोस्। यदि तपाईंले क्रिएटिन किनेज स्तर बढि बढा गर्नुभएको छ वा संदिग्ध मायोप्याथी यदि क्रिस्टर वा लिपिटर रोकिनु पर्छ।
दुर्लभ मामिलाहरूमा, प्रतिरोध मध्यस्थता नेक्रोटाइजिंग मायोपैथी (आईएमएनएम) भन्ने अवस्था स्टेटिन उपचारबाट देखा पर्न सक्दछ। लक्षण र लक्षणहरूले मांसपेशि कमजोरी र ल्याबहरूमा परिवर्तन समावेश गर्दछ।
बिरामीहरु लाई क्रेस्टर वा Lipitor सुरु गर्नु अघि लिवर एन्जाइम प्रयोगशाला परीक्षण हुनुपर्दछ, उपचारको क्रममा यदि कलेजोमा कुनै समस्या देखा पर्‍यो भने, र / वा जब डाक्टरले यो रगत परीक्षणको लागि उपयुक्त छ भन्ने महसुस गर्दछ। स्टेटिन औषधीहरूले AST वा ALT स्तर बढाउन सक्दछ। दुर्लभ मामिलाहरूमा स्टेटिन लिने बिरामीहरूमा कलेजो असफलता (घातक वा गैर-घातक) देखा पर्‍यो। कलेजो वा Lipitor तुरून्त रोक्न पर्छ यदि कलेजोमा गम्भीर चोटपटक आयो भने। यदि तपाईं थकान, भोक कम हुनु, गाढा पेशाब, वा छाला वा आँखाको पहेंलो लक्षण छ भने तुरुन्तै आफ्नो डाक्टरलाई सम्पर्क गर्नुहोस्।
धेरै रक्सी पिउने बिरामीहरूमा सावधानीका साथ Crestor वा Lipitor प्रयोग गर्नुहोस्।
कलेजो रोगको इतिहासको साथ बिरामीहरूमा सावधानीका साथ क्रिस्टर वा लिपिटर प्रयोग गर्नुहोस्। सक्रिय कलेजो बिरामी व्यक्तिले Crestor वा Lipitor प्रयोग गर्नुहुन्न।
ग्लुकोज स्तर र हिमोग्लोबिन A1C स्तरमा परिवर्तन क्रिस्टर वा Lipitor बाट हुन सक्छ। जोखिम बढेर केटोकोनाजोल, स्पिरोनोलाक्टोन, वा सिमेटिडाइनको प्रयोगसँगै बढ्छ।
दुर्लभ मामिलाहरूमा, मेमोरी गुमाउने वा भ्रम हुन सक्छ। निर्देशनको लागि तुरून्त तपाईको स्वास्थ्यसेवालाई सम्पर्क गर्नुहोस् यदि तपाई वा प्रियजनले कुनै परिवर्तन देख्नु भयो भने।
एक अर्काको १२ घण्टा भित्र क्रिस्टर वा लिपिटरको दुई खुराक नलगाउनुहोस्।
Crestor वा Lipitor दिन को कुनै पनि समयमा खाना संग वा बिना लिन सकिन्छ। सम्पूर्ण ट्याब्लेट निल्छ।
भ्रूण हानीको जोखिमको कारणले गर्भावस्थामा क्रिस्टर वा लिपिटर कहिल्यै प्रयोग गर्नु हुँदैन। Crestor वा Lipitor लिँदा स्तनपान नगर्नुहोस्।
अतिरिक्त Crestor चेतावनी:
एन्टिकोआगुलेन्ट (जस्तै वारफेरिन) लिने बिरामीहरूलाई क्रिस्टर लिनु अघि सावधानीपूर्वक निरीक्षण गरिनुपर्दछ, र अक्सर स्टेटिन उपचारको सुरूमा आईएनआर स्थिर रहन सुनिश्चित गर्न।
एल्युमिनियम र म्याग्नेशियम युक्त एन्ट्यासीड लिने बिरामीहरूले क्रिस्टर लिदा कम्तिमा दुई घण्टा पछि एन्ट्यासीड लिनु पर्छ।
अतिरिक्त Lipitor चेतावनी:
लिपिटरको साथ अ gra्ग्रेजी र / वा अpe्गुरको रस (१.२ लिटर भन्दा बढी) को अधिक खपतले मायोपैथी र राबडोमाइलिसिस जोखिम बढाउन सक्छ।
क्रिस्टर बनाम लिपिटरको बारेमा प्राय: सोधिने प्रश्नहरू
Crestor के हो?
क्रिस्टर एक स्ट्याटिन हो, वा HMG-CoA रिडक्टेस अवरोधक, सामान्यतया उच्च कोलेस्ट्रोलको उपचार गर्न प्रयोग गरिन्छ। यसको जेनेरिक नाम रोसुवास्टाटिन हो। Crestor दुबै ब्रान्ड र जेनेरिक फार्ममा र ट्याब्लेटको रूपमा उपलब्ध छ।
लिपिटर, जस्तै क्रिस्टर, एक स्ट्याटिन औषधी हो जुन उच्च कोलेस्ट्रोलको लागि प्रयोग गरिन्छ। यसको जेनेरिक नाम atorvastatin हो। यो ट्याब्लेट फारममा उपलब्ध छ, दुबै ब्राण्ड र जेनेरिकमा।
के क्रिस्टर र लिपिटर एकै छ?
Crestor र Lipitor दुबै स्टेटिनहरू हुन्। तिनीहरू समान तरिकाले कार्य गर्दछन् र केही समानताहरू छन्। यद्यपि तिनीहरू वास्तवमा उस्तै छैनन्। तपाईं माथि उल्लिखित जानकारीमा तिनीहरूको भिन्नताहरूको बारेमा पढ्न सक्नुहुन्छ। अन्य स्टेटिनहरू जसमा तपाईंले सुन्नु भएको हुन सक्छ प्रावाचोल (प्रावास्टाटिन), Zocor (सिम्वास्टाटिन), लिभालो (पिटाभास्टाटिन), लेस्कोल (फ्लोभास्ट्याटिन), र मेवाकोर (lovastatin)।
के Crestor वा Lipitor राम्रो छ?
अध्ययनले दुबै औषधिलाई कोलेस्ट्रोल कम गर्नका लागि प्रभावकारी देखाउँदछ (माथिको खण्ड हेर्नुहोस्)। केही अध्ययनहरूले क्रिस्टर थोरै बढी प्रभावशाली भएको देखाउँदछ; यद्यपि दुबै औषधिहरू प्रभावकारी र राम्रोसँग सहनशील छन्। तपाईंको स्वास्थ्य सेवा प्रदायकलाई सोध्नुहोस् कि यी औषधीहरू मध्ये कुनै एक तपाईंको लागि उपयुक्त हुन्छ, तपाईंको मेडिकल ईतिहासको आधारमा।
एक औषधि परीक्षण मा nortriptyline शो हुनेछ
के म गर्भवती हुँदा Crestor वा Lipitor प्रयोग गर्न सक्छु?
होईन। क्रिस्टर वा लिपिटरलाई कहिल्यै गर्भवती महिलाले लिनु हुँदैन। दुबै औषधीहरू विशेष गरी गर्भधारणको समयमा प्रयोगको लागि contraindication हो। तिनीहरूले अजन्मे बच्चालाई हानी गर्न सक्दछन्। यदि तपाइँ क्रिस्टर वा लिपिटर लिइरहनुभएको छ र तपाइँ गर्भवती हुनुहुन्छ भनेर फेला पार्नुभयो भने, स्टेटिन लिन रोक्नुहोस् र मेडिकल सल्लाहको लागि तुरुन्तै तपाइँको डाक्टरलाई सम्पर्क गर्नुहोस्।
के म Crestor वा Lipitor रक्सीको साथ प्रयोग गर्न सक्छु?
सामान्यतया, यो एक उपभोग गर्न सुरक्षित छ मदिरा को साना देखि मध्यम राशि यदि तपाइँ Crestor वा Lipitor लिनुहुन्छ। जहाँसम्म, यदि तपाईलाई कलेजो समस्या छ, वा अत्यधिक मात्रामा रक्सी पिए पनि, स्टेटिन र मदिरा मिश्रण गर्नु अघि तपाईको स्वास्थ्य सेवा प्रदायकसँग जाँच गर्नुहोस्। दीर्घकालीन कलेजो रोग भएका व्यक्तिहरूले स्ट्याटिन लिँदा पूर्ण रूपमा रक्सीबाट अलग रहनु पर्छ।
के क्रिस्टर लिपिटर भन्दा सुरक्षित छ?
Crestor र Lipitor दुबै सहिष्णु छन्। कुनै पनि औषधीको साइड इफेक्ट हुन्छ, केहि दुर्लभ तर गम्भीर सम्भावित साइड इफेक्टको साथ। अध्ययन (माथिको सेक्सन हेर्नुहोस्) ले देखाए कि दुबै औषधी परीक्षणहरूमा राम्रोसँग सहिन्थ्यो।
Crestor लिदा कुन खाद्य पदार्थ खानबाट टाढा बस्नुपर्छ?
जब तपाईं Crestor (वा Lipitor) लिनुहुन्छ, तपाईंले स्वस्थ आहार कम संतृप्त फ्याट र कोलेस्ट्रॉल खानु पर्छ।
केहि खानाहरू तपाईं टाढा हुन चाहानुहुन्छ फ्याट मीट, पूर्ण-फ्याट डेअरी, र मिठाईहरू। यसको सट्टामा फलफूल, तरकारीहरू, सम्पूर्ण अन्नहरू, सिमी, नट, र कुखुरा र माछा जस्तो दुब्ला प्रोटिन जस्ता खानाहरूमा फोकस गर्नुहोस्।
यद्यपि लिपिटरले अंगूरको रससँग (धेरै मात्रामा) अन्तर्क्रिया गर्दछ, क्रिस्टरले अंगूरको रस लिन सुरक्षित छ।
के Crestor ले तपाईंलाई वजन बढाउन बनाउँछ?
Crestor वजन सीधा लिंक छैन। यदि तपाइँ Crestor लिदै हुनुहुन्छ र तौल परिवर्तन याद गर्नुहुन्छ भने, तपाइँको स्वास्थ्य सेवा प्रदायकलाई सम्पर्क गर्नुहोस्।
Zantac vs. Prilosec: मुख्य भिन्नता र समानताहरू
तपाइँको रक्त शर्करा कति कम हुन सक्छ
कसरी सही डेपो जन्म नियन्त्रण शट छ
पेप्टो बिस्मोलले तपाइँको पेटमा के गर्छ?
मतली र टाउको दुखाई को लागी काउन्टर औषधि मा
के हुन्छ यदि तपाइँ २४ घण्टामा ib भन्दा धेरै ibuprofen लिनुहुन्छ